Mascara Eveline VOLUMIX FIBERLAST - Haddii aad rabto inaad tuurto 250
Mascara Eveline VOLUMIX FIBERLAST - 审查
Haddii aad rabto inaad tuurto 250 rubles, xor u noqo inaad iibsato Eveline VOLUMIX FIBERLAST mascara
Maalin wanaagsan dhamaan intii aragtay!
Waan aqaanay Eveline VOLUMIX FIBERLAST midabka dhowr sano. Run, markii ugu horreysay ee aan iibsado qiyaastii 5 sano ka hor, ka dibna waan adeegsaday. Mabda 'ahaan, aragtiyadeedii waxay ahaayeen kuwa togan oo keliya. Iyo dhowr toddobaad ka hor waxaan go'aansaday inaan ku celiyo tijaabada. Maxaan dhihi karaa isla markaaba? Waan ka xumahay inaan ku qaatay 250 rubles! Mascara si cad bay uga sii dartay!
Laakiin waxyaalaha hore marka hore.
Tuubbo Mascara ah ayaa umuuqata mid si fiican u qanacsan:
Burushka sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay: silicone, oo leh cirib dherer kala duwan
Waagii hore, waxay la jirtay burush qaabkan ah oo aan awooday inaan rinjiyeeyo meel kasta oo cilium ah.
Laakiin sida muuqata waxbaa iska beddelay qaab dhismeedka bakhtiga laftiisa, maadaama aysan su’aal la iska weydiin karo natiijo wanaagsan.
Marka hore, xuduuduhu si fiican uma shaqeeyaan, oo waxoogaa yar oo mascara ah ayaa kudhaca cadayga halkii aan jeclaan lahayn. Walxaha yaryar ayaa hadha, taas oo markaa degaysa indhaha. Daacad ahaan, aqoon uma lihin tan!
Codsiga mascara mar labaad (oo marwalba aan codsado mascara laba jeer) waa dhibaato.
Hagaag, waxa ugu xun - Mascara si xun ayaa loo bakhtiiyay! Sidoo kale anigu tan kama aan kulmin muddo dheer. Intaa waxaa dheer, waxay bilaabeysaa inay markiiba burburato.
Waxaanna hubaa in mascara noocan oo kale ahi UU shaqeyn doonin hablaha da'da yar ee u nugul xasaasiyadda. Indhahaygu waxay bilaabeen inay si xun uga xoqaan iyada. Hagaag, tani gabi ahaanba ma fiicna!
Waxaa lagu daray (ama halkii laga jaray) mascara si xawli ah u dhaca. Taasi waa, laga bilaabo xilliga la soo iibsashada illaa daqiiqadda markay noqoneyso wax aan suurtagal ahayn in la isticmaalo, waqti aad u yar - 2/3 toddobaad.
DIIWAANKA: Kuguma talinayo mascara. Lacagtan waxaa jira xulashooyin M BADAN oo mudan.
Un examen complet des masques et gommages maison les plus efficaces pour le soin de la peau des lèvres à la maison!29 days美容、保健不同
这是相同的，令人难以置信的高质量的项目可以便宜！ 我的睫毛喜欢它！ 前/后2 months化妆品
Kaaral净化皇家强烈的营养调：了解优势和隐藏的缺陷。 比较有更多的预算手段(以及有意义要付出更多?)欣赏的结果的照片。about 2 months关爱化妆品
希望延长的耐久性的你最喜欢的卫生间的水埃文陈布兰卡? 那么芳香的身体乳液埃文陈布兰卡为你！about 2 months关爱化妆品
حدايتي وحبي. عظيم لشعري.29 days关爱化妆品
إذا كان هدفك هو الشباب ، فأنت لست هنا. إذا كنت تبحث عن كريم جيد - فانتقل)29 days关爱化妆品